cajalad ayaa nolosheyda burburisey | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
cajalad ayaa nolosheyda burburisey
Aabahood wuxuu kashaqeyn jirey Dukaan siâ€™uu uguhelo waxaay gabdhihiisa quutan iyo waxay labistaan.
Gabadhani waxay aheyd qof dadaal badan xaga duruusta schoolka .Waxay caan kuâ€™aheyd xaga Akhlaaqda iyo dadaalka ay waxbarashada kubixinjirtey. Waxaay aheyd tusaale ay kudaydaan gabdhaha kale ee jaamacada dhigta.Marka lasoo gaabiya, waxaay kulansatey sifaadka fiican ee qof lagu sheego.
â€œ qurux badan. Waan kujeclaheyâ€¦.inaan kuguursada ayaan rabaa. Mudo badan ayaan kuraadinaayey markii aan maqley akhlaaqdaada iyo wanaaga ay dadka kugu sheegayaan !â€
Maalintii danbe markii aan kasoo baxey jaamacada ayaan kula kulmey hadana iridka isaga oo isugaya ii dhoola cadeynaya. Sidii silaâ€™eg ayaan ugu cararey. Dhowr jeer ayuu sidaas oo kale isoo weerarey oo aan kacararaayey ilaa aan kacaado yeeshey arintii.
â€œHaddii aad edebyeelanwaydo,waxaan usheegaya waalidkey waadna ogaan doontaa wixii kugudhacaâ€ Ayaan ugu caga jugleeyey.
Waxaan bilaabey inaan rumeysto dhamaan hadaladiisa gaar ahaan marka uu iguyirahdo waxaad tahey xaaskeyga mustaqbalka dhow. Daar weyn ayaan kuu taagaya. Dunida oo dhan baan kudabaalsiinaya. Dadna waa adiga oo kaliâ€¦â€¦
Sidii caadada aheyd ayaan islabaxney oo aan is raacney. Wuxuu igeeyey guri aad loo qurxiyey oo sifiican loo gogley. Waana is garab fariisaney anagoo is eeg-eegeyna. Waxaan hilmaamey Xadiithkii Nabiga Salallahu Aleyhi Wasalam ee uu nooga digey inaay nin iyo naag ajnabi kala ah meel cidlaâ€™ah wada fariistaan! Waxaan bilaawney inaan eegaya oo uu isagana i eegaya ilaa aan is arkey anigoo hoos jiifa! Waxaan arkey anigoo gacan kuheynin wixii aan lahaa wixii ugu qaalisanaa! Waxaan soo kacay sidii anigoo waalan markaas ayaan ku iri: â€œmaxaad igu sameyneysaa? Hacabsan!Waxaad tahey xaaskeyga? Sideen xaaskaada kunoqdey adigoon imahersan? Ayaan kucalancaley! Waan kumahersandoona mardhow!â€ Ayuu iigu laabqaboojiyey!
Guriga ayaan aadey anigoo murugeysan;lugaha qaadilaâ€™a oo ooynaya! . Waxaa igushidmey dab jirka oo dhan. Gabalkii ayaa ii ayaa igu madoobaadey! Waxaan bilaabey inaan habeyn iyo maalin ooyo. Waxaan katagey waxbarashadii.Xaaladeydii ayaa sii xumaatey! Qoyskanigii ayaa igu wareerey ayagoo layaaban waxa igu dhacey!
Waa tana balaayo kale oo kadaran tii hore! Telephone ayaa soo dhacey!Waa isagii oo aad mooda codkiisa inuu kasoo hadlaya meel fog. â€œWaxaan rabaa inaan kulano oo aan kawada hadalno arin muhiim ahâ€ Ayuu iguyiri. Aad ayaan ufarxey anigoo uheysta inuu doonaya inuu nikaax sameynayo iyo aroos waliba!
Waxaan utagey isagoo aad moodo sheydaan wuxuuna igu yiri: â€œWaxaan kugu bishaareeynaya inaadan iga sugin wax guur ah waliga!Waxaan rabaa inaan kuwada noolaano sidaasâ€ Dharbaaxo ayaan kaga soo qaadey ay indhuhu lasoo dhicigaareen! Waxaana usheegey inuuyahey nin akhlaaq laabe ah oo mustaqbal dooneynin.Waana katagey anigoo ooynaya!
â€œWaxyar isug!â€Ayuu igu yiri. Waxaa gacanta ugujira Cajalad Video ah. Wuxuuna igu yiri sijees jees ah: â€œTaas ayaan kuburburinaya noolashaadaâ€ â€œMaxaa kuduubanâ€ Ayaan weydiyey. â€œKaaley oo arag waxa kuduuban. Waxaay kugu noqondoontaa layaabâ€ Ayuu igu yiri.
Waan raacey siâ€™aan usoo arko waxa kuduuban.Waxaan ku arkey dhamaan Faaxisho ahaa ee nadhexmarey markii aan guriga joogney! Maxaad sameysey Yaa Thaalim? â€œCamera ayaa guriga galiyey oo duubtey.Cajaladaan ayaan kuu heystaa oo aan kugu burburinaya haddii aad diidid waxa aan rabo!
Cajaladii ayaa faaftey.Waxaay gacanta ugashey ina adeerkey. Arintii ayaa laba qaraxdey. Waxaa kawarheley waalidkey iyo dhamaan reerkayagii oo dhan.Waxaay usii gudubtey ceebtii oo ay qaadatey dhamaan magaaladii oo dhan. Gurigayagii waxa hareeyey ceeb.Waan dhuuntey siâ€™aan ubadbaadiyo nafteyda.
Waxaan kubiirey dumarka jirkooda kaganacsado anigoo murugeysan.Ninkaan wuxuu horey usoo baleeyey gabdho kale oo sideyda oo kale kaduufsadey schoolka. Waxaan goâ€™aansadey inaan ka aargoosta oo aan kusameeya mid kaxun tuu igudhigey.
Maalin ayuu ii soo galey isagoo aad ucabsan.Waxaan u degdegey inaan kafaaâ€™ideysto jaaniskaan. Waxaan caloosha kagaliyey toorey! Halkaas ayaan kudiley Insaan-shaydaankii. Waxaan kagaraaxeeyey dadkii uu dhibilahaa gadaashey!.
Waxaan uqorey sheekadaan siâ€™aay ugunoqoto waano gabdhaha yaryar ee soo kacaya siâ€™aysan ugukadsoomin hadalada jilicsan ee ay raga kusiraan dumarka.
Aabahey wuu dhintey isagoo kucalcelin Waxaan kusoo hordhigey sawir kaamil ah sidii aan uburburiyey noolasheydii iyo tii qoyskayaga.
Aabahey wuu dhintey isagoo kucalcelinaya: â€œ XASBIYA ALLAH WANICMALWAKIIL! ANAA QADBAAN ALEYKI ILAA YOWMUL QIYAAMAHAâ€ MAA ASCABAHAA MINKALIMAHA.
Waxaa idiin soo bandhigtay MULKI ADAN
waa madaxa webka nololcusub.tk
c/casiis maxamed sheekh axmed
wargelin Isu qurxi xaaskaaga adiguna